April 2018 – Kalfadhi
April 30, 2018 April 30, 2018 Kalfadhi
Doorasho ay ku baratameen ku dhawaad 10-musharax oo u tartamaysay xilka Gudoomiyaha Golaha shacabka oo horey uu iskaga casilay Gudoomiyihii hore ee Golaha shacabka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa maanta si nabad ah uga dhacday magaalada Muqdisho. Musharax xildhibaan Wasiirkii hore ee Gaashandhiga Soomaaliya Maxamed Mursal ayaa ugu dambeen ku guulaystay doorashadii maanta ka dhacday aqalka Golaha shacabka. Wareega Labaad ee doorashada, Waxaa isugu soo horay Musharixiinta kala ah Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan iyo Ibraahim Isaaq Yaroow, Labadanba waxey xubno ka ahaayeen Xukuumada Ra’iisul Wasaare Xasan Kheyre balse xilalkoodii waa…
Xildhibaan Aadan Madoobe oo ka tanaasulay tartanka afhayeenka golaha shacabka
Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe) ayaa goor dhaw xarunta golaha shacabka kaga dhawaaqay in uu ka tanaasulay musharraxnimadiisa xilka afhayeenka golaha shacabka. ‘’ Waxaan doonaya mudane guddoomiye in aan shaaciyo in aan go’aansaday in aan ka tanaasulo musharraxnimadayda, ‘’ Waxaan u tanaasulaya walaalaheyga maadama aan hore u soo noqday guddoomiyaha golaha shacabka,’’ ayuu yiri,Aadan Madoobe. Magacyada Musharrixiinta 1-Xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarow 2-Xildhibaan Cali sheekh Maxamuud Nuur 3-Xildhibaan Cabdicasiis Xasan Maxamed 4-Xildhibaan Saalim Caliyow Ibrow 5-Xildhibaan Shariif sheekh Maye 6-Xildhibaan Idiris Cabdi Dhaqtar 7-Xildhibaan Maxamed Mursal sheikh Cabdiraxmaan 8-Xildhibaan Shariif Maxamed…
Baarlamaanka Soomaaliya oo maanta dooranaya guddoomiye cusub
Xildhibaannada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa in ay doortan guddoomiye cusub si uu beddel ugu noqdo Maxamed sheekh Cusmaan (Jawaari). 11 musharrax ayaa u taagan xilka guddoomiyenimo ee golaha shacabka,kuwaas oo 5 kamid ah ay ahaayen xubno ka tirsanaa golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya ka hor inta aysan iska casilin xilalkooda. Magacyada Musharrixiinta 1-Xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarow 2-Xildhibaan Cali sheekh Maxamuud Nuur 3-Xildhibaan Cabdicasiis Xasan Maxamed 4-Xildhibaan Saalim Caliyow Ibrow 5-Xildhibaan sheekh Aden Maxamed Nuur Madoobe 6-Xildhibaan Shariif sheekh Maye 7-Xildhibaan Idiris Cabdi Dhaqtar 8-Xildhibaan Maxamed…
Golaha Shacabka oo ka tacsiyeeyay geerida xildhibaan Khaliif Sheekh
April 29, 2018 April 30, 2018 Kalfadhi
Guddoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka Soomaaliya ahna ku simaha guddoomiyaha xildhibaan Cabdiweli sheekh Ibraahim Muudey ayaa tacsi u diray ehelada iyo qoyskii uu ka geeriyooday allaha u naxariistee xildhibaan Khaliif sheekh Cabdullaahi oo xalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho. Xildhibaannada golaha shacabka ayaa sido kale tacsi u diray qoyska xildhibaan Khaliif sheekh Cabdullaahi. Mudenayaasha Golaha shacabka ayaa berito dooran doona guddoomiye cusub si uu beddel ugu noqdo Maxamed sheekh Cusmaan (Jawaari). Jawaari ayaa 12-kii bishan Abriil iska casilay xilka afhayeenka golaha shacabka kadib khilaaf siyaasaded oo soo kala dhexgalay…
Xildhibaan Khaliif Duurey oo ku geeriyoodey Muqdisho
Allaha u naxariistee waxa xalay magaalada Muqdisho ku geeriyooday xildhibaan Khaliif sheekh Cabdullaahi duurey oo ka tirsan xildhibaannada golaha shacabka Soomaaliya. Xildhibaanka oo xanuunsana ayaa xalay fiidkii hore ku dhintay cusbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho,sida ay qortay wakaallada wararka dowladda ee SONNA. Geerida allaha u naxariistee xildhibaan Khaliif sheekh Cabdullaahi ayaa timid hal maalin ka hor iyada oo ay xildhibaannada isku diyaarinayan in ay doortan guddoomiyaha cusub ee golaha si uu beddel ugu noqdo Maxamed Cusmaan (Jawaari) Xildhibaan Duurey waxa uu kamid ahaa mudenayaasha golaha shacabka ee laga soo doortay…
Xildhibaannada ku jira madasha horusocod oo doortay hoggaan cusub
April 28, 2018 Kalfadhi
Kudlada Horusocod oo ay ku mideysan yihiin xildhibaanno ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta doortay hoggaan cusub maalmo kadib markii uu xafiiska ka tagay guddomiyihii golaha shacabka Maxamed sheekh Cusmaan (Jawaari). Xildhibaannada ayaa guddoomiye u doortay xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur halka guddoomiye ku xigeen loo doortay senator Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag oo ka tirsan golaha aqalka sare ee Soomaaliya. Xildhibaan Cali Cabdi Cusmaan (Caliyow) ayaa sido kale loo doortay xoghayaha kudlada Horusocod,sida ay tabiyen warbaahinta maxaliga ah. Xildhibaan Cabdirashiid Xidig oo guddoona golaha shacabka kula tartamay guddoomiye…
Sanataro ku baaqay in loo gurmado dadka ay saameyen Fatahaada Wabiga Shabeelle
Sanataro ka tirsan aqalka sare ee Barlamaanka Soomaaliya ayaa maanta fadhi ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxa ay kaga hadleen sidii gurmad deg deg ah loola gaari lahaa dadka ku dhibaateysan gobolka Hiiraan gaaran magaalada madaxda oo ah Beledweyne oo dadka ay la dhibaateysanyihiin fataahada uu sameeyay wabiga shabeelle. Sanataradaan oo kala ah Naciima Ibrahim Yusuf,Maxamed Xuseen Raage,Cisman Axmed Macow iyo Maxamed Cisman ayaa si wadajir ah ula hadlay warbaahinta. Sanatarada oo ah kuwa laga soo doortay degaanada maamulka Hirshabeelle waxa ay baaq adag ay u direen madaxda dowladda Soomaaliya…
Kullankii maanta ee golaha shacabka oo lagu dhageystay hadal jeedinta 5 musharrax
April 26, 2018 Kalfadhi
Xildhibaannada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta dhageystay qudbaddaha 5 musharrax oo u taagan xilka afhayeenka golaha. Musharrixiinta maanta lahaa hadal jeedinta waxaa kamid ahaa wasiirkii gaashandhigga xildhibaan Maxamed Mursal sheekh Cabdiraxmaan. Waxaa si rasmi ah loo gebagabeeyay dhageysiga hadal jeedinta 11 musharrax oo doonaya in ay beddel u noqdan Maxamed sheekh Cusmaan (Jawaari) afhayeenkii hore ee golaha shacabka ee iscasilay. Guddiga qaban qaabada doorashada golaha ayaa seddexda cisho ee soo socota kusoo koobi doona howlahooda si maalinta Isniinta loo doorto guddoomiye cusub.
Musharrixiinta guddoonka golaha shacabka oo maanta soo gebagabeynaya hadal u jeedinta xildhibaannada
Musharrixiinta u tartameysa xilka afhayeenka golaha shacabka ayaa maanta soo gebagabeynaya qudbaddahooda musharraxnimo ee ay ka hor jeedinayan xildhibaannada golaha si ay uga codka kalsoonida. Shan musharrax oo uu ku jiro Maxamed Mursal sheekh Cabdiraxmaan ayaa maanta qudbaddo ka jeedin doona golaha ka hor inta uusan guddiga qaban qabaada doorashada ku dhawaaqin in la soo xiray hadal jeedinta musharrixiinta. Lix musharrax ayaa shalay golaha shacabka ka jeediyay qudbaddo ay ka muuqden ballan qaadyo badan oo la xiriira horumarinta howlaha golaha iyo dib u dhiska dhismaha golaha shacabka oo aad…
Xildhibaannada golaha shacabka oo maanta dhageystay qudbaddaha lix musharrax
April 25, 2018 April 25, 2018 Kalfadhi
Lix musharrax oo kamid ah 11 xildhibaan oo u taagan xilka guddoomiyenimo ee golaha shacabka Soomaaliya ayaa maanta qudbaddahooda musharraxnimo waxa ay ka hor jeediyen xarunta golaha shacabka ee Muqdisho. Ajandaha maanta ee fadhigii afaraad ee golaha waxa uu ku saabsanaa hadal jeedinta musharrixiinta guddoonka aqalka hoose. Musharrixiintii maanta hadlay. Xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarow Xildhibaan Saalim Caliyow Ibrow Xildhibaan Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta gareen) Xildhibaan sheekh Aden Maxamed Nuur (Madoobe) Xildhibaan Idiris Cabdi Taktar Xildhibaan shariif Maxamed Cabdalla. Waxaa weli harsan 5 musharrax oo maalinta berito ah qudbaddahooda ka jeedin…